Ihe Nlekọta 15 Winstrol kachasị mkpa Ịkwesịrị Ịmata Tupu Ịzụta Winstrol Online
/blog/gallery/Ihe Nlekọta 15 Winstrol kachasị mkpa Ị Kwesịrị Ịmara Tupu Ịzụta Winstrol Online
Ihe na 01 / 17 / 2019 by Dr. Patrick Young dere na gallery.
Ihe niile banyere Winstrol
1. Gịnị bụ Winstrol? 2. Kedu ka Winstrol si arụ ọrụ?
3. Elu 15 Winstrol Uru na Bodybuilding 4. Winstrol Dosage
5. Winstrol Ọkara ndụ 6. Oge nyocha Winstrol
7. Winstrol okirikiri 8. Winstrol Post Cycle Treatment
9. Ogologo oge ole ka ọ na-ewere iji hụ Winstrol Results? 10. Ihe na-emetụta Winstrol Side
11. Otu esi egbochi nsogbu Winstrol 12. Winstrol Contraindications
13. Otu esi zụta Winstrol Online 14. Winstrol ntụ ntụ Ntụziaka
Ndi steroid nke anabolic bụ ihe a na-ahụ anya mgbe ị na-achọ ilelata ahụ gị ma na-ejidekwa ahụ ike ahụ n'otu oge? Chọpụta ma ọ bụrụ na ọ bụ ego dị mma na stanozolol (Winstrol) steroid, uru ọ nwere karịa ndị ọzọ steroid, na otu esi zụta winstrol.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkụ abụba ma nwee ahụ ike, ị nwere ike denye aka na ntụrụndụ ma rụọ ọrụ mmemme. Otú ọ dị, nke a chọrọ nkwụsi ike na ọzụzụ mgbe niile. Nanị ụzọ a ga-esi eme ya ghara ibu ibu ngwa ngwa, nwekwuo ntachi obi, ma nweta ma ọ bụ nọgide na-arụ ọrụ ahụ bụ site na iji ọgwụ steroid.
N'adịghị ka ndị ọzọ na-agwọ ọrịa steroid bụ ndị mmetụta dị ukwuu karịrị uru ahụ, winstrol nwere ọtụtụ uru nye onye ọrụ ahụ. Otu ihe ọzọ ị kwesịrị ịma bụ na o nwere ọgwụgwọ ụfọdụ.
1. Gịnị bụ Winstrol?
Nkọwa nke Winstrol
Tupu ịdata na ibe a, ị nwere ike ịjụ ọtụtụ ajụjụ ndị metụtara, "Gịnị bụ winstrol na ihe ọ na-eme?" Ọfọn, isiokwu a ga-emeghe karịa ị chọrọ ịmata.
Winstrol ma ọ bụ Stanozolol bụ ọgwụ ndị sịntetik nwere ma anabolic na androgenic Njirimara. N'ihu ya, usoro ọgwụ a na-eburu CAS no. 10418-03-8. Stanozolol na-enweta site na dihydrotestosterone (DHT). Usoro nhazi ahụ na-agụnye condensing 3-keto-aldehyde nke oxymetholone na hydrazine.
Winstrol dị ma ọ bụ dị ka okwu ọnụ ma ọ bụ ọgwụ na-egbu egbu. Ọ na-eme site na ịmalite njikọ protein ma na-eme ka uru ahụ dị elu. E wezụga nke ahụ, ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-atụkọta ya n'oge ọkpụkpụ ọnwụ iji nweta anụ ahụ a na-eji azụ ma ọ bụ nwoke. A machibidoro ịṅụ ọgwụ na ọtụtụ mba gụnyere USA FDA kpochapụtara ya dị ka ihe akụrụngwa III.
N'agbanyeghi n'ichepụta ihe anabolic properties, winstrol na-ejikwa ụfọdụ ọgwụgwọ eme ihe. Dị ka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịgwọ ọrịa ndị na-egbute ahụ ike, na-akpali mmepụta nke hemoglobin, nakwa n'ịgwọ ọrịa angioedema. Ọ bụ ezie na stanozolol dị naanị n'okpuru ezigbo ọgwụ ọgwụ dọkịta, ị ka nwere ike ịchọta Winstrol maka ire ere na ọtụtụ ụlọ ahịa n'ịntanetị.
Ọgwụ a bụ ugboro atọ anabolic ma e jiri ya tụnyere testosterone. N'ịbụ C17-alpha alkylated steroid, stanazolol nwere usoro nhazi dị iche iche nke sitere na mgbanwe nke dihydrotestosterone hormone. N'ihi nke a, ihe ahụ bụ 10x anabolic karịa ọ bụ androgenic.
Mmiri Winstrol malitere na 1959. Ọdụdọ Winthrop mepụtara ya na ebumnuche nke ịgwọ ọrịa na-egbu egbu na nke na-egbu egbu. Ike njigide nke nitrogen nke ọgwụ a na-eme ka ọ bụrụ ọgwụ ikike maka ọrịa mgbu. Site na 1962, o nweelarị nkwado nke Food and Drug Administration (FDA).
Ihe mere Winstrol ama ama bụ esemokwu arụmụka ọ na-enwe n'oge Olympic nke 1980s. Aga m akọwa. Na egwuregwu 1988, Ben Johnson meriri nrite ọla edo mgbe ọ kwụsịrị na ọsọ 100M. O debere ihe ndekọ ọhụrụ site na iti ọkpọ n'egwuregwu Olympia dị ịrịba ama, Carl Lewis.
N'agbanyeghị na ọ bụ onye mmeri na-akwado ụwa, a kwụsịrị Johnson maka iji Stanozolol mee ka ọrụ ya dịkwuo mma. N'ihi nke a, ndị ọchịchị kwụsịrị akara ya ma mesịa kwụsị ya na Olympics.
Mgbe ihe a na-eme ka steroid na-eme ka ọ dị irè, ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-agbaso ya n'egwuregwu. Otú ọ dị, gọọmentị United States bịara jiri nwayọọ na-eji steroid. N'ihi nke a, ọ kwadoro iwu ndị na-achịkwa mmepụta, iji, na ire nke mgbakwunye ndị a.
Aha Winstrol aha
Rịba ama na ụdị ọgwụ nke ọgwụ a bụ chemical crystalline na-acha ọcha. Ọtụtụ ndị mmadụ na-achọta Winstrol ntụ ntụ ụtọ iji sie ike.
2. Kedu ka Winstrol si arụ ọrụ?
Winstrol bụ steroid nke heterocyclic nwere njikọ siri ike maka njikọ maka ndị na-anabata etrogen. Ọ ga - eme ka ọ bụghị nanị ịkọwapụta ndị na-edozi kamakwa ọ ga - eme ka e guzobe collagen. Ọgwụ ahụ na-agba ọsọ anabolism nke ndị na-edozi ahụ mgbe ọ na-eme ka ihe omume ọjọọ ahụ gbanwee.
Ọ na-eme ka ụbụrụ Mmekọahụ Binding Globulin (SHBG) dị njọ, n'ihi ya, na-ebute mmụba na testosterone n'efu. N'ikpeazụ, ahụ gị na-ewere ihe anabolic properties.
Ihe kachasị emetụta ọrịa steroid bụ anabolic bụ àgwà estrogenic. Otú ọ dị, winstrol agaghị adaba n'ime estrogen. Ihe kpatara ya bụ na A-mgbanaka nke gbanwere òtù 3-keto, na-eme ka ọgwụ ahụ ghọọ steroid.
Ọnụnọ nke otu akụkụ nke methyl n'ime usoro ya na-eme ka bioavailability nke stanozolol dị n'ahụ. Ihe ga-eme ka winstrol pụta ìhè dị ka ụbọchị 14.
3. Elu 15 Winstrol Uru na Bodybuilding
Ọ bụrụ na ịchọrọ irite uru na winstrol, ị kwesịrị itinye ya na ya arụmọrụ kwesịrị ekwesị ọchịchị na nri siri ike. N'ihe dịka ahụ anyị na-agbanwe dịka usoro ọgwụgwọ na mmeghachi omume, ịgbaso ntuziaka na ịnọgide na-enwe obere oge ga-azọpụta gị site na mmetụta ndị dị na ya.
Winstrol uru 1: Ihe ize ndụ ndị dị na Estrogen Aromatization
Ihe na - eme ka Winstrol pụta n'etiti ndị ọzọ na - arịa ọrịa anabolic bụ eziokwu na ọ dịghị agbanwe n'ime estrogen. Maka ndị ọrụ nwoke, nke a bụ akụkụ kachasị mkpa ị nwere ike ịchọ na ịṅụ ọgwụ ọjọọ.
Ka m kọwaa ya. Ozugbo ahụ dị n'ime ahụ, ndị na-akwọ ụgbọ ọgwụ na-achọkarị ịbanye n'ime estrogen. Mmetụta mmetụta nke estrogenic agaghị enwe obi ụtọ karịsịa ma ọ bụrụ na ị ga-agagharị na obi nne, nke ọ bụla mmadụ ga-enwe obi ụtọ inwe.
Ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla ga-ahapụ gị na mkparịta ụka gbasara ize ndụ nke aromatization, mgbe ahụ ọ bụ winstrol vs anavar ụtọ akụkọ. Uzo abuo abuo a adighi egosiputa uto domino nke mgbanwe nke estrogen ma obu nchighari mmiri.
Winstrol uru 2: Ọkpụkpụ Egwuregwu
Winstrol na-ekere òkè n'ịzụlite anabolism nke protein. Ọ na - eme ka mkpụrụ ndụ ahụ nwee ike ịmepụta ma jidekwa ọtụtụ protein dịka o nwere ike, ya mere, ịba ụba na ike ahụ na ume. N'ihi mmụba na usoro nrịba nke anụ ahụ, ahụ na-emepụta adenotriphosphate, nke na-ebute ọrụ dị mkpa n'ime ụlọ ahụ.
Tote stanozolol na Deca steroid na ụfọdụ ọrụ mmepụta, na ị ga-enwe winstrol tupu na mgbe utịp na-aga ịrịa.
Uru Winstrol 3: Ike na Ntachi Obi
Onye ọ bụla ọkachamara bodybuilder ga-akwado ma kwenye na steroid, nke nanị na-eme ka ike ahụ ike na-enweghị na-eme ka ntachi obi gị na-abaghị uru.
Ya mere, olee otu stanozolol si eme ka ike gị sikwuo ike? Ka m kọwaa ya. Ọgwụ na-eme ka mkpụrụ ndụ ọbara uhie dị n'ahụ gị pụta. Ebe ọ bụ na mkpụrụ ndụ ndị a na-ebu ibu maka ikuku oxygen, akwara na-enweta ezigbo oxygen iji nagide ogologo oge na ike.
N'ihi ọrụ ike cortisol-blocking, winstrol ga-emezi usoro mgbake na igbochi nchekasị ma ọ bụ ịda mbà n'obi. Ọ bụ n'ihi nke a ka ndị ọrụ na-ekere òkè na asọmpi asọmpi dị ka ịgba ígwè ma ọ bụ egwuregwu ịgba ọsọ, ụlọ akụ na steroid maka ịkwalite ọrụ ha.
Uru Winstrol 4: Mmiri Bulking
Onye dọkịta nwere ike ịkọ winstrol maka ndị ọrịa na-esiri ike inweta ma ọ bụ na-egbochi ịdị arọ nkịtị. Otú ọ dị, nke a abụghị kpọmkwem ihe m chọrọ ịfe.
A na-adụkarị ndị inyom ọdụ ka ha ghara ịdọrọ oyi n'ahụ anabolic steroid n'ihi na ọ ga-ekwe omume na-emetụta ha. N'aka nke ọzọ, a bụ ụfọdụ ozi dị ukwuu na nhazi nwoke na nwanyị na ụlọ ọrụ ahụ. Winstrol maka ụmụ nwanyị O doro anya na ị ga-eme ka ụbụrụ gị dị ike ghara ịkọwa banyere ntutu isi, akụkụ elongated, ma ọ bụ ụda olu.
Uru Winstrol 5: Ọdịdị Dị Mfe nke Androgenic Side Effects
Winstrol bụ otu n'ime steroid nke anabolic ole na ole na-atụtụghị na androgenic dị ala. Ya mere, ma ndị nwoke ma ndị nwanyi nwere ike ịnata ụkọ ntutu ma ọ bụ ihe otutu.
Otú ọ dị, ọ pụtaghị na ị nweghị nchebe kpamkpam site na mmetụta ndị a winstrol. Kwe ka m wụnye ìhè ebe a. Ụfọdụ ndị mmadụ na-enwe mmetụta nke mkpụrụ ndụ na-etinyere na androgenic ọbụna mgbe ọ na-apụtachaghị ìhè. Ọ bụrụ na ị daa n'okpuru ụdị a, mgbe ahụ, ọgwụ ahụ ga-aba gị mma.
Uru Winstrol 6: Ụdị Ahụhụ (Ịcha Mgba)
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị steroid niile bụ anabolic ga-eme ka ọ bụrụ na a na-ekpuchikwa ahụ ike. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-arụ ọrụ ma ọ bụ onye na-egwu egwuregwu asọmpi, ọdịdị dị ukwuu nwere ike igbochi arụmọrụ gị na mpi.
Ihe kacha mma maka winstrol bụ na ọ na-enyere onye ọrụ aka ijide ahụ ike. Ọ bụ n'ihi nke a ka a na-eji ọgwụ ahụ eme ihe na oge igbutu oge iji belata abụba anụ mgbe ọ na-aga. Nnukwu winstrol Club na Primobolan na ị ga-enwe anya dị ichiiche na ọdịdị ọdịdị.
Uru Winstrol 7: Enweghi njigide mmiri
Na hormones na etrogenic dị ugbu a na steroid bụ isi ihe kpatara sodium jide, ya mere, àgwà nke ahụ na-ejide mmiri. Mkpụrụ ọgwụ ndị na-eme ka estrogenic dịkwuo, otú ahụ ka mmiri gị ga-ejigide. E wezụga nke a, a na-ejikọta akụkụ a n'akụkụ ịkwọ ụgbọ na ọbara mgbali elu.
Ka ọ dị ugbu a, e nwere nanị steroid atọ nwere mkpụrụ ndụ diuretic. Ndị a bụ stanozolol, anavar, na trenbolone. Ọ bụrụ na ị ga-atụle uru nke Winstrol vs anavar, ị ga-achọpụta na ha abụọ nwere mmetụta ndị na-eme ka mmadụ nwee ahụmahụ. Otú ọ dị, Winny ga-enyere gị aka inweta ahụ ike karịa ndị ọzọ atọ steroid.
Uru Winstrol 8: Ọgwụgwọ eji
Uche dị n'azụ Winstrol mepụtara steroid na ebumnuche nke ịkwalite ahụ ike na-emebi ọnọdụ. Isi ọgwụgwọ nke stanozolol bụ ọgwụgwọ nke angioedema, nke gụnyere agụba ihu, akpịrị, ma ọ bụ akụkụ ahụ.
Ọnọdụ ndị ọzọ nke ga-etinye gị n'okpuru ọgwụ ọgwụ nke winstrol gụnyere ọrịa cancer decubitus, anemia aplastic, osteoporosis, imebi ọrụ fibrinolytic, ma ọ bụ ọdịda ọdịda. E wezụga nke ahụ, steroid bụ ihe ngwọta kasịnụ maka nsogbu ụfọdụ, nke enwere ike ijikwa ya site na ịmalite usoro mmeghasị.
M kwuru na winstrol abụọ dị ka mmadụ na anụmanụ steroid? Ugbu a ị maara! N'agbanyeghi mmegide nke ụmụ anụmanụ na-ekere òkè na asọmpi dị ka ịgba ịnyịnya, Winny bụkwa ọgwụ ọgwụ. Ọ na-eme ka enwekwu eto eto na ụmụ ehi ma na-elekọta ọtụtụ nsogbu ndị na-edozi ahụ na nwamba na nkịta.
Uru Winstrol 9: Zuru okè maka Steroid Stacking
Ọ bụ ezie na ọdịiche dị iche iche nke anabolic steroid, ị pụghị ịtọkọta ha dịka swiiti. Ntọala steroid kwesịrị ekwesị na-eme ka nsonaazụ dị mma. Otú ọ dị, nsogbu ahụ na-abata mgbe ị ga-achọpụta nke nke mgbakwunye na-ejikọta nke ọma na onye ọzọ, na otu kachasị mma ị nwere ike isi kpoo ma tụnyere ha.
Kwe ka m kọwaara ya ihe mere ị ga-eji jiri ọgwụ ndị ọzọ dochie Winstrol.
Ihe ka ọtụtụ n'ụbụrụ nke anabolic ga-ejikọta na Mmekọahụ Hormone-Binding Globulin. Njedebe dị elu nke SHBG na-eme ka ọrụ steroid ghara ịdị na ahụ onye ahụ, ya mere, na-eme ka ọgwụ ahụ ghara ịdị.
Okwu ahụ dị iche na winstrol ebe ọ na - ewetu ọkwa SHBG n'ime ahụ. Ya mere, ị nwere ike ịdọrọ ya na ọtụtụ steroid ma ka na-enweta uru ahụ na ụbụrụ magburu onwe ya. Ngwakọta Winstrol anyị kwesịrị ekwesị gụnyere trenbolone, cardarine, Primobolan, andarine, anavar, ma ọ bụ masteron.
Testosterone dịkwa mma maka nchịkọta kama jide n'aka na ị ga-ewelata obere doses ka ị ghara imeri utịp aromatization.
Uru Winstrol 10: Bioavailability elu
Na bioavailability nke steroid ga-ekpebi mgbe niile ike ya. Maka stanozolol, e nwere otu ụdị methyl n'ime usoro ya nke na - eme ka ọ ghara ịdị ndụ ruo awa 24. Nke a na-eme ka ahụ nwee ike ịba n'ime imeju na-agbajikwa.
Uru Winstrol 11: Ụzọ otutu nchịkwa
I nwere ike iji okwu ọnụ ma ọ bụ site na injections intramuscular. A na-enye onye nke mbụ ugboro abụọ n'ụbọchị ebe ọkara ọkara ya dị ihe dị ka elekere itoolu. N'aka nke ọzọ, nke a nwere ogologo ndụ ọzọ, ya mere, were otu ugboro n'ụbọchị.
Ọ bụrụ na anyị na-aga site na akụkọ ndị na-azụ ahịa, ọtụtụ ndị ọrụ kweere na ụdị injectable na-enweta nsonaazụ kacha mma. Otú ọ dị, otu ihe ga-eme ka ha kụọ ihe ọ bụla bụ ihe mgbu na-egbu mgbu, nke na-adịgide ọbụna mgbe nchịkwa ahụ gasịrị.
Ịchọrọ ịzọfe mmetụta nke imeju imeju? Mgbe ahụ, ị ​​kwesịrị ịgbanye ma ọ bụghị ilo mpi ahụ. Site na ogwu ahụ, winstrol ga-abanye n'usoro mgbasa ozi n'egbughịjujujujujujujujujujuju.
Uru Winstrol 12: Nmetụta ole na ole
Dịka ọgwụ ọ bụla, winstrol nwekwara mmetụta ndị ọzọ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịrapagidesie ike na ọgwụ Winstrol a na-atụ aro ka ị na-enwe oge dị mkpirikpi, ị ga-enweta obere ihe ọbụla na-enweghị mmetụta ọ bụla.
Ihe kachasị njọ nke ndị mmadụ na-asọ oyi bụ ihe ndị hormones etrogenic na estrogenic kpatara. N'okwu a, winstrol nwere ọnụ ọgụgụ na-eto eto na androgenic na-enweghị ike ịbanye n'ime estrogen. Ya mere, ị dị mma!
Uru Winstrol 13: Mmetụta Ụmụ nwanyị
A na-akatọ ọtụtụ steroid nke anabolic na ụmụ nwanyị n'ihi oke dị elu nke mmeghachi omume androgenic. Ugo nke androgen ga-eme ka ntutu isi na ụmụ nwoke, olu na-emetụkwuo ụmụ nwanyị, na ụfọdụ mmetụta ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ nke ị ga-ebuli.
Ụdị ahụ dị iche na stanozolol ebe ọ bụ otu n'ime ndị steroid ole na ole nke ụda androgenic dị ala. Nkọwa dị mfe n'etiti etrogen na anabolic oke nke ọgwụ a na testosterone ga-eme ka ọ bụrụ 10.7: 1 na 1: 1, n'otu n'otu. Site na ụkpụrụ ndị a, ị ghọtara ugbu a ihe mere ị ka nwere ike ịga n'ihu na-akwado winstrol maka ụmụ nwanyị n'esepụghị aka dị ka Jay Cutler.
Uru Winstrol 14: Anụmanụ anụ
Na ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ, stanozolol (Winstrol / winny) na-eji ọtụtụ ọgwụgwọ eme ihe nakwa dịka steroid nke anabolic. Ná mmalite, ọ bụ nanị ụmụ anụmanụ ka a na-eji eme ihe. Ụfọdụ ndị mmadụ ga-eji ọgwụ ahụ eme ihe mgbe ị na-egwu maka ịnya ịnyịnya ma ọ bụ asọmpi anụmanụ ọ bụla ọzọ.
Uru Winstrol 15: Ọsọ ọsọ na Njikwa
O nwere ike ịbụ na ị jụọla ihe mere otu onye na-agba ọsọ na-agba ọsọ maka steroid, bụ nke ga-eme ka uru ahụ nwee ike ịhapụ ya. Ọfọn, winstrol ga ọ bụghị naanị na ị ga - eme ka ume gị dịkwuo ike, kamakwa ọ ga - enyere gị aka ịbawanye uru gị na ọsọ gị n'ozuzu. A sị ka e kwuwe, ndị na-eme egwuregwu ga-elebara ọrụ ha anya karịa ịlụ ha.
Ọ bụrụ na anyị ga-atụle ihe niile uru winstrol, Echere m na anyị ga-achọ akwụkwọ zuru ezu. Ụfọdụ uru ndị ọzọ gụnyere ịme ka ọkpụkpụ ọkpụkpụ dịkwuo ike, na-ewusi mkpịsị aka na njikọta, na -emepụta ọdịdị siri ike ma ọ bụ nke na-egbuke egbuke.
Winstrol na-enye gị ntụgharị ịhọrọ n'etiti ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ injectable usoro onunu ogwu. Ha abụọ na-egosi stanozolol dịka hormone na-arụsi ọrụ ike na C17-aa steroid. Oge kwesiri ịkọ ọgwụ bụ tupu ma ọ bụ n'oge nri.
Ohaneze, stanozolol dị na mbadamba nkume ma ọ bụ mkpụrụ ọgwụ. Ebe ọ bụ na ndụ ndụ nke winstrol ruru awa itoolu, ọ ga-adị mkpa iji ya ugboro abụọ iji kwado ya.
Ụdị okwu ọnụ dị iche n'etiti 40 na 80mg. Ihe onu ogugu nke Winstrol di n'okpuru okwu ole na ole di ka ihe mmadu nwere na steroid, ogo nke ndidi, na ihe ichoro ime. Rịba ama na, ịjujujujujujujujujujujujuju na oke dị elu ga-eweghachi gị n'azụ mmetụta na-enweghị ike ime.
N'ọtụtụ ọnọdụ, Winstrol maka ire ere dị na ngwugwu nke ma ọ bụ 10mg ma ọ bụ mbadamba 50mg. Ndị ọrụ nwere ike ịga maka oke dị elu mana ndị inyom kwesịrị ịnọ na ala.
Ụmụ nwanyị ndị na-azụta nnukwu onunu ogwu, ekwesịghị ịhapụ ebe ọ bụ na ha nwere ike ịkewa pill ahụ n'ime mkpụrụ ego iri anọ ma rie nri na 12.5mg / ụbọchị. N'aka nke ọzọ, ndị ikom zụta Winstrol na mbadamba 10mg ka nwere nchekwa iji capsules ise kwa ụbọchị.
Dị ka Winny dị n'ụdị mbadamba, ụdị ole na ole na-emepụta ọgwụ na mmiri mmiri. Mmiri ahụ dị egwu ma nwee ezigbo uto. Otú ọ dị, ịnwere ike ịkwụsị ụtọ site na ịṅụ ihe ọṅụṅụ ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ ị họọrọ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnara injections, otu nchịkọta ahụ ga-ejide gị maka oge 24 sochirinụ. Ọdịdị ahụ dabara n'etiti 50 na 100mg dabere ma ị bụ pro bodybuilder, onye ọrụ ozo, ma ọ bụ onye na-amalite.
Ị nwere ike ịgbanye onwe gị na mkpịsị aka, ogwe aka elu, ma ọ bụ apata ụkwụ.
5. Winstrol Ọkara ndụ
Winstrol ọkara ndụ na-etinye aka na ụdị usoro ọgwụgwọ mmadụ na-ewere. Dị ka ọmụmaatụ, mkpụrụ ọgwụ ọnụ nwere oge 8-9 na-enye ndụ. Maka ịgba ogwu, oge ahụ dị ogologo oge 24.
6. Oge nyocha Winstrol
Ọ bụrụ na a na-eme nchọpụta mgbochi doping, oge nchọpụta bụ izu atọ na asatọ, n'otu n'otu. Ọnụ ọgụgụ ndị a na-egosi na winstrol agaghị aba uru na ndị na-eme egwuregwu na-eme egwuregwu ebe ọ bụ na ọgwụ ọjọọ na-apụ n'anya 2 - 4 izu mgbe ọ gwụchara.
7. Winstrol okirikiri
Ogologo nkwado nke winstrol adịghị adị karịa izu isii. Otú ọ dị, ndị nwere ahụmahụ nke iji steroid nwere ike iji ya ruo izu asatọ. Ọ bụ ezi uche na ị belata usoro ọgwụgwọ izu abụọ tupu njedebe nke oge ahụ. Ọ bụ ezie na ọgwụ na-etinye ụlọ maka ịkwado steroid, ị gaghị eji ya na C17-aa steroid.
Ọ bụ ezie na ndị inyom kwesịrị ịnọgide na-enwe ọgwụ kwa ụbọchị nke 10mg / ụbọchị, nwoke bodybuilders kwesịrị iji nkezi 50mg / ụbọchị. Otú ọ dị, ndị ọrụ pro nwere ike ime 100mg kwa ụbọchị naanị n'ime izu abụọ gara aga nke oge ahụ.
8. Winstrol Ọgwụgwọ Ọgwụgwọ Post Post
Na ngwụcha nke winstrol okirikiri, ị ga-enweta ọgwụgwọ iji gbochie ịda mbà n'obi na mkpochapụ hormone. Ọ bụ ma ị na-amalite ịmalite ịmalite ụbụrụ testosterone nkịtị ma ọ bụ mechie ahụ ike ị nwetara n'oge izu isii. Nzọụkwụ dị ala nke testosterone ga-eme ka ị daa mbà ma nwee mmetụta na-adịghị ike.
9. Ogologo oge ole ka ọ na-ewere iji hụ Winstrol Results?
Stanozolol na-amalite imetụta ozugbo ị banyere usoro ọhụụ ọhụrụ ahụ. Otú ọ dị, mgbanwe a na-ahụ anya na-eme n'oge izu nke abụọ. Site na ụbọchị 14, jide n'aka na ị ga-esi na enyo na-amụmụ ọnụ ọchị kemgbe winstrol tupu na mgbe ihe oyiyi ga-ada gị.
Cheta na nkwonkwo muscle a adịghị eme ka onye ọrụ ọ bụla mee ihe dị mma. Maka ọdịda, muscular, na shredded physique, ị ga-arụ ọrụ na nri gị, nri, na mmega ahụ ọchịchị.
Nke a bụ nkwụsịtụ n'ihe ị ga-atụ anya n'ime usoro 6 - 8 izu;
1 Enweghị mgbanwe a na-ahụ anya ma ahụ ga-efunahụ mmiri ọzọ
2 Rịba amababa abụba na ume dị mma
4 Ịba ụba na ike kachasị elu
6 Ọdịdị ahụ dị mma nke akọwapụtara ya na obere arụmọrụ na arụ ọrụ
Lelee ụfọdụ ihe ndị ị ga - eme iji hụ na ị ga - enweta ụtọ nsonaazụ ahụ nke winstrol;
Na-agbanwe agbanwe mgbe niile na mgbatị gị maka uru anụ ahụ
Gaa na ndị McDonalds burgers na ndị na-atọ ụtọ, ndị na-eri nri, ma ọ bụ nri ndị dị oke
Na-aṅụ mmanya na-aba n'anya ma ọ bụrụ na ị nọ na-arụ ọrụ igbu onwe gị nke na-emebi emebi imeju gị
Rịbaa imeju gị na mmiri dị oke mmiri n'oge niile
Were nri bara uru na vitamin C dịka mkpụrụ osisi citrus
Gụnye ihe omume cardio na usoro nlekọta gị
Kpoo ọbụbụenyi na akwụkwọ nri akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ
10. Ihe na-emetụta Winstrol Side
Ihe ndị na-esi na iji Winstrol eme ihe dịgasị iche site n'otu onye gaa na nke ọzọ n'ihi ọdịiche nke hormonal. Ịnagide mmetụta ndị na-akpata steroid nwere ọnụọgụ dị ka ọnwu, ma ị nwere ike belata ihe ize ndụ site n'ịgabigaghị usoro ọgwụgwọ ma na-aga maka obere oge.
Mgbochi nke Testosterone karịsịa mgbe ọ na-aga n'ihu
Ọganihu nke cholesterol dị njọ, ya mere, ịmalite ihe ize ndụ nke ọrịa strok ma ọ bụ ọgụ obi
Ihe mgbu na nkwonkwo na-adabere na nkụ na-akpata site na obere ala synovial
Mmetụta ịda mbà n'obi mgbe okirikiri
Ihe na-akpata obere oge, nke na-adịru ihe dị ka izu anọ
Nleta nke nwanyi n'etiti ndi nwanyi
Mbemiso epiphyseal maturation
11. Otu esi egbochi nsogbu Winstrol
Jiri cholesterol supplementation
Ọbụna ma ọ bụrụ na obi gị dị mma, jide n'aka na ị ga-eme ụfọdụ nlele. Otu ihe dị mkpa karị bụ ịmepụta mineral na ezi cholesterol dị mma na nri gị. Dịka ọmụmaatụ, mmanụ azụ bụ otu n'ime ihe mgbakwunye kachasị enweta maka ịchịkwa mmetụta nke winstrol.
Obere ọkwa nke testosterone na-eme n'oge oge okirikiri mgbe a na-emechi mmepụta ihe nke okike a. Ụzọ doro anya iji mesoo mmetụta a n'akụkụ bụ site na itinye ụfọdụ supplementation testosterone n'ime izu abụọ gara aga nke oge ahụ.
Ume ocha na-asacha
Ihe ndị dị ka TUDCA, Liv-52, NAC, ma ọ bụ mmiri ara ehi ga-echebekwa imeju gị.
Usoro nhazi usoro mgbasa ozi (PCT)
Ọtụtụ mgbe, steroid etrogenic na hormones ọ bụla ọzọ ga-ewe 2 - 3 izu iji kpochapụ na usoro gị. N'oge a, ị ga-eji usoro ọgwụ ọjọọ mee ihe iji belata ma mee ka ọnọdụ gị dị elu. Dịka ọmụmaatụ, iji nolvadex ma ọ bụ clomid ga-eweghachi mmepụta nke testosterone.
Oge PCT dị iche n'agbata izu abụọ na izu anọ.
Nnyocha na-egosi na steroid nwere ike iduga ịlụ nwa ebu n'afọ
Ndị na-arịa prostate na obi carcinomas
Ndị ọ bụla nwere hypersensitivity ka steroid
Ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma
13. Olee otú Zụrụ Winstrol Online
Ọtụtụ mba amachibidoro iji ọgwụ steroid anabolic. Ya mere, o siri ike ịchọta winstrol maka ire ere ọ gwụla ma ị na-akwaga ná mba ndị ọzọ nyere iwu kwadoro ya. Dịka ọmụmaatụ, na United States, Australia, UK, na Canada, ọ bụ iwu megidere, iji, ma ọ bụ kesaa onye ọ bụla steroid. Otú ọ dị, ọ bụ nanị ọgwụ dọkịta na-enye ọgwụ ọjọọ.
Winstrol Iwu Ịzụta
N'ihi ihe mgbochi ọ na-agba, winstrol nwere ike ịchọta ya nwa ahịa. Site na ahia ahịa, ị nwere ike inweta ihe ị na-achọ ma enwere ohere ịnweta ngwaahịa mbụ.
Dị ka ihe atụ, dịka ọmụmaatụ, Winny dị injectable dị na steeti mmiri. Ọ gwụla ma e mepụtara ya na ebe dị ọcha na nke na-adịghị ọcha, ihe ngwọta ahụ nwere ike ibute ọrịa germs na ọrịa. Maka nke a, ị ga-ebute ụzọ ịchọta ụlọ ọrụ kwesịrị ekwesị.
N'aka nke ọzọ, ilebanye anya na ụlọ ahịa ndị na-edebe ihe ọmụma n'Ịntanet nwere ike ịbụ ezigbo echiche.
Zụrụ Winstrol Online
Nanị ụzọ doro anya ịzụta nnukwu mmadụ-ọkwa stanozolol bụ site n'ịzụ ahịa n'ịntanetị. Ị ga-aga ịzụta ọgwụ na ndị ọzọ na-anaghị eche banyere ịṅụ ọgwụ steroid, mana nke a yiri ka ọ bụ mgbagwoju anya. Na Mexico, dịka ọmụmaatụ, iwu na-achịkwa iji ọgwụ anabolic steroid nwere nnọọ mmasị na ụmụ amaala ha.
14. Winstrol ntụ ntụ Ntụziaka
Winstrol ntụ ntụ 1g 5g
190 Ngosipụta Mmanya Mmanya 31.2ml -
80 Polysorbate - 3ML (3%)
Mmiri na-ekpo ọkụ - 62.5ml
Benzyl mmanya - 3ML (3%)
McMullin, GM., Smith, C., Watkin, GT., Scurr, JH. Mmetụta nke mmekorita Fibrinolytic na Stanozolol na Ọgwụgwọ Venous Oru, Akwụkwọ Australia na New Zealand Journal of Surgery, April 1991.
Kicman, AT, Pharmacology nke Anabolic Steroid, British Journal of Pharmacology, PMC 2439524, Online, 2018
Falanga, V., Greenberg, AS, Zhou, L., et al., Ntughari nke Sylagen Synthesis site na Anabolic Steroid Stanozolol, NCBI Isiokwu, Online, December 1998
Bates, PC, Millward, DJ, Chew, LF, Mmetụta nke Anabolic Steroid Stanazolol na Uto na Protein Metabolism na Rat, PubMed Publications, Online, September 1987
Oxymetholone na-ekwu: The Ultimate Guide of Oxymetholone (Anadrol)	Raw Proviron (Mesterolone) na bodybuilding, usoro, na okirikiri